Sakafo hampihena ny lanjany ao anatin'ny 2 andro → Kibo fisaka ao anatin'ny 48 ora! | Nutri Diet
PaÃ¼ Heidemeyer | | soso-kevitra, Vatsim-pivelomana, fahasalamana
Mila mihodina ny kibonao ve ianao?
¿Fomba fanodinana ny kibo? Sakafo lavorary ity ho an'ireo olona rehetra mila manidina ny tummy mandritra ny fotoana fohy ary manao izay hisolelaka ny kibony. Drafitra izay tsy ampidiranao sakafo betsaka, ary raha ataonao amin'ny taratasy izany, ankoatry ny fikororohana, dia hamela anao ho very 1 XNUMX kilao.
Izy io dia sakafo atolotra ho an'ireo olona te-hanala ny sasany kibo ary mitantana ny fitiavana, toy ireo izay mahatsiaro voadoboka amin'ny gazy ary izany dia miteraka fanelingelenana ho azy ireo.
Toy ny mahazatra hatrany ity karazan-tsakafo ity Tsy tokony hotehirizina mandritra ny roa andro mahery izy ireo satria mety hampidi-doza azy ireo amin'ny fahasalamanao izy ireo ary ampitomboinao izany amin'ny fihoarana.
Manaraka izany dia manana sakafo ianao mba hahavery lanja kibo. Tsy maintsy averinao ny menio voatanisa etsy ambany mandritra ny roa andro izay maharitra ny sakafo, amin'izay vao afaka mihodina ny kibonao ianao.
1 Menu mandritra ny roa andro
1.3 sakafo atoandro
1.4 Afak'andro tolakandro
1.6 sakafo hariva
2 Torohevitra hampihena ny kibony
3 Fanazaran-tena hampihena ny kibony
3.1 Crunches avy amin'ny tany
3.3 Tongotry ny sahona
3.4 Mamelatra ny abs anao
4 Afaka mihena haingana ve ianao?
5 Ahoana ny fomba manify ny kibo amin'ny vehivavy
6 Manamainty ny kibony amin'ny lehilahy
Menu mandritra ny roa andro
Una atsofoka tantely kely ary a vera misy ranom-boankazo vaovao safidy.
Fampidirana safidinao sy yaourt skim.
Soa-legioma maivana, ampahany malala-tanana amin'ny salady legioma manta safidinao, grapefruit na voasary ary dite kaopy misy zava-mamy. Raha noana kokoa ianao dia afaka manana habetsaky ny ron-kena tadiavinao.
Fampidirana safidinao ary ronono an-tsiranoka iray vera.
Ny famafazana ny safidinao sy ny toast mofo feno dia miparitaka fromazy fotsy maivana. Raha tsy tianao ny fromazy dia azonao atao ny manova azy amin'ny hamà turkey 100 grama.
Ny ron-kena legioma maivana toy ny chard, asparagus, voatabia, sns. Akoho voaendy 70 grama, hanina legioma manta na nandrahoina nofidinao, paoma na plum ary kaopy dite maitso. Afaka misotro ny habetsaky ny ron-kena tianao ianao.
Alohan'ny hatoriana dia zava-dehibe ny fisotroanao fampidirana ny safidinao sy / na ny tangerine hanampy amin'ny famoahana tsiranoka mandritra ny alina.
Ary dia izay, raha manaraka an'ity sakafo ity mandritra ny 2 andro ianao dia hahatratra mamontsina kibo amin'ny fomba manan-danja.
Torohevitra hampihena ny kibony
Manampy amin'ny famoahana tsiranoka ny dite mena
Eto ambany dia manolotra anao ny lisitry ny toro-hevitra manan-danja izay tsy maintsy raisintsika ho mitazona kibo fisaka. Tsy anisan'ny sakafo izy ireo, fa torolàlana mahaliana sasany izay hanampy anao hanatsara ny endrikao sy hampihena kibo mampatahotra.
Mampiasà sira kely amin'ny sakafonao hialana amin'ny fitazonana ranoka
Noho io antony io ihany dia ilaina izany misotro ranon-javatra roa litatra farafahakeliny manaraka toetr'andro. Aleo amin'ny endrika rano na dite maitso sy mena, satria izy ireo dia manampy amin'ny fanatsarana ny fivezivezena ao amin'ny tsinay, mamoaka poizina ary mampihetsika ireo tavy nangonina tao an-kibonao.
Aza mihinana haingana. Ny fihinanana sakafo be loatra dia mahatonga anao tsy handevona tsara ny sakafo ary hamokatra lasantsy. Ankoatr'izay, ny fihinana miadana dia mahatonga anao hanandrana sakafo bebe kokoa, hankafizinao ary hamenoana haingana ny tenanao. Mitsako tsimoramora mba 20 minitra mahery ny sakafo.
Aza misotro zava-pisotro misy asidra toy ny alikaola, kafe, sôkôla mafana sns ... satria mahasosotra ny tsinay sy mandrehitra ny kibonao ireny.
Tandremo ny zava-mamy, satria misy mpamokatra siramamy (toy ny maltitol) mamokatra entona. Tsy manome kaloria izany fa mampivonto kokoa ny kibonao ka asaina hisorohana azy ireo.
Fanazaran-tena hampihena ny kibony
Tokony tsy hiala amin'ny fampihetseham-batana sy ny sakafo ara-batana isika Raha te-hahita vokatra tsara indrindra amin'ny endritsika isika dia fenoy ny sakafo ara-batana amin'ny sakafo tsara mba tsy hisy hahasakana ny tanjontsika.
La vavony Izy io dia iray amin'ny faritra sarotra indrindra hahavery tavy sy volume. Na izany aza, misy fanazaran-tena maro natao handoroana kaloria eto amin'ity faritra ity, etsy ambany dia holazainay aminao hoe iza amin'ireo no hahazo ny vokatra tsara indrindra.
Crunches avy amin'ny tany
Ny kibo no be mpampiasa indrindra hampihenana ny andilana, handratra ny kibo ary hanafoana ny tavy eo an-toerana ao amin'io faritra io. Afaka mahita isika karazana abs maro, fa hifantoka amin'ny tena fahita izahay, ny tsara indrindra ho an'ny olona rehetra mba hanao fanazaran-tena na ao an-trano na any amin'ny gym.
Miaraka amin'ny fanampian'ny tsihy na tsihy mandry ao an-damosinao miaraka amin'nytongotra aondrika ary ny tongotrao hisosotra amin'ny tany. Apetraho ao ambadiky ny lohanao ny tananao nefa tsy misy fanerena, atsangano ny vatan-kazoo amin'ny alàlan'ny fanosehana ny kibonao ary tazomy hatrany ny hazondamosinao, aza aolinao ny tendanao na terenao.
Ny tsara indrindra dia manaova seta 4 an'ny famerenana 20 tsirairay avy.
Azonao atao ny mampitombo ny hamafin'ny fanatanjahan-tena raha manainga ny tongotrao hiala amin'ny tany ianao.
Amin'ny teny anglisy dia fantatra amin'ny hoe fiaramanidina, fampiharana tena azo ampiharina izay lasa malaza be. Tao anatin'ny segondra vitsy dia maro ny faritra amin'ny vatana no miasa.
Ny paozy dia atao amin'ny fomba tena tsotra. Miaraka amin'ny fanampian'ny tsihy, mandry miankohoka amin'ny vodin-tanana sy ny tendron'ny hoditra. Ataovy avo ny fihetsika fa mahitsy ny lamosinao. Ny kiho dia tokony ho eo ambanin'ny soroka.
Mandanjalanja mandritra ny 20 segondra ary manaova seta 5.
Tongotry ny sahona
Mipetraha eo amin'ny tsihy ary tazomy mahitsy ny lamosinao ary miondrika amin'ny rivotra ny tongotrao. Alefaso mandroso sy miverina indray ny tongotrao. Fifanekena ny kibonao ary ento miaraka akaiky ny tongotrao sy ny tratranao. Manaova push-up 20 ao anaty seta 3.
Mamelatra ny abs anao
Es zava-dehibe hanitarana ity faritra ityTsy maintsy ataontsika izany amin'ny fandriana amin'ny tsihy miaraka amin'ny vatantsika manontolo mivelatra ary ny tanantsika mipetraka eo amin'ny tany. Tsy maintsy manangana ny tananao ianao, mba hampiakatra ny lohan'ny vatana amin'ny kibo nifanarahana.
Afaka mihena haingana ve ianao?
Hitanay ihany koa ny fahazarana manampy anay tsy hanana tavy amin'ny kibo, raha iray amin'ireo izay mahita fa sarotra ny manao fanatanjahan-tena dia manoro hevitra anao izahay handeha 30 minitra isan'andro farafahakeliny hitsangatsangana ary araho amin'ny fahazarana mahasalama.
Misotroa rano betsaka. Zava-dehibe ny rano hanapoahana ny vatana, hisorohana ny fivontosana ary manampy handevon-kanina, hanamaivana ny fitohanana sy gazy tsindraindray. Amin'ny salan'isa, voafaritra fa tokony misotro rano roa litatra isan'andro ianao.
Fehezo ny fihinanana sira. Ny sira dia mampitombo lanja antsika noho izy io mitazona tsiranoka tsy ilaina.
Zatra mihinana sakafo voalanjalanja. Izany dia tratra amin'ny fandrefesana ny habetsan'ny gliosida, tavy ary vokatra kaloria. Tokony hameno ny vata fampangatsiahana sakafo ambany kaloria ianao, toy ny voankazo, legioma ary proteinina mahasalama, ary koa menaka manitra ilaina.
Mihinana kely 5 heny isan'andro. Aleo mihinana imbetsaka ary tsy be loatra isaky ny manome sakafo. Io no lakilen'ny fihazonana ny metabolisma hiasa sy handoro kaloria bebe kokoa.
Aza misotro zava-pisotro misy gazy. Ireo dia mampivonto ny kibonay nefa tsy tadiavintsika izany, na dia laninao aza ireo izay tsy misy siramamy na kaloria, dia tsy misy vokany. Aleo misotro infusions, ranom-boankazo na rano.
Ahoana ny fomba manify ny kibo amin'ny vehivavy
Ny vatan'ny vehivavy dia tsy mitovy amin'ny an'ny lehilahy, ary ny mampiavaka ny sasany dia mety hahatonga azy ireo hihena ny tavy kibo fa tsy ho azy ireo. Manaraka izany, omenay anao ny lakile raha vehivavy ianao ary te ho very ny kibonao.
ny yogaNy yoga dia tena ampirisihina hanao fanazaran-tena satria fanatanjahan-tena mahasalama, na ho an'ny vatana na ho an'ny saina. Ny yoga dia hitazona anao ho mavitrika ary tsy hanelingelina ny tonon-taolana.
Manaova fanatanjahan-tena: Na inona na inona safidinao, ny fifandraisana misy eo amin'ny ekipa dia mitazona anao ho mavitrika, izany koa dia manampy anao hanadio ny andraikitrao mandritra ny ora roa. Ho fanampin'izany, amin'io fanatanjahantena io ihany no hampiasanao ny faritra maro amin'ny vatana nefa tsy tsikaritrao.
Mandihy: Safidy tsara izy io satria io no iray amin'ireo fomba mampiala voly indrindra hampihenana lanja. Ny fampiharana farafaharatsiny fandihizana 20 minitra isan'andro dia hahatonga anao ho mavitrika ary hahatsapa ho afa-po ianao.
mandeha: ny zavatra tsara indrindra dia ny mandeha farafahakeliny 30 minitra isan'andro, ity fanazaran-tena tsotra ity dia mampihetsika ny vatana ary raha mifintina ny kibo mandritra ny dianao dia hampihatra azy ianao. Hivezivezy tsara kokoa ny fivezivezena ary hifehezana ny habetsan'ny oksizenina miditra ao amin'ny havokavoka ianao.
Manamainty ny kibony amin'ny lehilahy
Ny lehilahy dia mavitrika kokoa noho ny vehivavy, mirona hanao hetsika ara-batana bebe kokoa amin'ny andavanandrom-piainany ary manana ny fanatanjahantena heverina ho be indrindra.
Ho azy ireo dia tsara ny mampidina ny kibony mba hanao toy izao:
Aza mihinana zava-pisotro misy alikaola: ity no iray amin'ireo antony voalohany amin'ny famokarana tavy kibo amin'ny lehilahy, noho izany, izany no dingana voalohany manaraka. Ahenao ny fisotroanao alikaola ary miezaha misotro zava-pisotro kaloria tsy misy poizina tsy misy siramamy fanampiny.
Sorohy ny siramamy sy ny tavy: siramamy sy tavy amin'ny sakafo dia tokony hesorina isaky ny azo atao. Izahay dia miresaka mofomamy, mofomamy, mofomamy, vatomamy na gilasy ary zava-pisotro mamy. Ireo no tompon'andraikitra indrindra amin'ny fananana tavy ao amin'ny kibony.
Manampy proteinina bebe kokoa amin'ny sakafonao: mampitombo ny fihinanana sakafo manan-karena amin'ny proteinina, trondro manga, atody, fromazy, yaorta voajanahary, voa, voanjo ary proteinina mahia.
Atsaharo ny gliosida: ireo farany mivadika siramamy sy siramamy ho matavy. Raha zatra tsy mihinana gliosida isika dia hihena ny fahazotoan-komana ka hihabe ny lanja. Mila miezaka fotsiny ianao amin'ny fiandohan'ny fanovana.
Ampahafantaro ny sakafo manankarena fibre bebe kokoa: aza mihinana mofo fotsy, na vary sy paty mahazatra, andramo hatrany ny mitady ny tsy fitovizany satria hanome anao fibre betsaka kokoa izy ireo ary hanampy anao handroaka ny poizina avy amin'ny vatana amin'ny fomba mora kokoa. Raha te hihinana vary ianao dia araho ity sakafo fihinanam-bary.
Manaova fampihetseham-batana intelo isan-kerinandro: ny fampihetseham-batana aerobika dia tena soso-kevitra, na mandeha, mihazakazaka, mandeha bisikileta na manao spaoro amin'ny gym. Tsy maintsy miaraka amina fahazarana matory tsara, matory 7 ka hatramin'ny 8 ora isan'andro ary miaraka amin'ny sakafo voalanjalanja.
Betsaka ny torohevitra azontsika soratana sy tanterahantsika mba hahafahantsika manala ny tavy kibo. Fetsy kely izy ireo azontsika ampidirina miandalana amin'ny fomba fiainantsika Mba hahazoana fahasalamana tsaratsara kokoa dia hahatsapa ho salama kokoa ianao, amin'ny angovo bebe kokoa ary ny herim-po bebe kokoa hiatrika ny andronao. Efa nanandrana ny Sakafo 500 kaloria? Manoro hevitra azy izahay ho toy ny fomba iray hafa hampihena ny lanjany haingana.
Raha tianao ny anay sakafo hanalefahana ny kibo, mamporisika anao izahay hiditra amin'ny vondrona Facebook anay fipihana ny rohy manaraka. Amin'izany no handraisanao ny lahatsoratray sy ny sakafonay rehetra mba hitazomana ny fahasalamana sy ny fahasalamana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » soso-kevitra » Sakafo mba hampihenana ny kibonao ao anatin'ny 2 andro
elizabeth vargas loaiza dia hoy izy:
Izaho dia 14 taona, ny zazalahy tiako dia mampiahiahy ahy matavy ary te hihena nefa tsy vitako fa hiezaka aho
Mamaly an'i elizabeth vargas loaiza
ysnita dia hoy izy:
Salama Elizabeth, voalohany indrindra, aza mampijalin'ny zazalahy raha manambany anao tsaratsara kokoa izy satria tsy mendrika izany Misy zavatra lehibe kokoa amin'ny fiainana toy ny fianarana mitia ny tenanao sy ny fomba hanombanana tsara ny tenanao fa raha mety mihena ianao Nanandrana sakafo Sakafo gliosida ambany aho tahaka ny fisotroan Atkins rano 8 vera isan'andro ary mahafinaritra ahy mandritra izany. fa manoro hevitra anao aho hitsidika mpahay sakafo iray alohan'ny hanandramanao na inona na inona. Raha milaza ianao fa efa nanandrana ny zava-drehetra, fa mandra-pahoviana? Mianara mikiry ary mahasambatra ankizilahy tia mahazo aina sy faly miaraka amin'ny zazavavy ary raha malahelo ianao na dia mahia sy tsara tarehy aza ianao dia tsy hitady anao mitsiky foana ny zazalahy ary hahay hiatrika ny zava-drehetra amin'ny fihetsika tsara. tadidio ny Toe-tsaina dia saika ny zava-drehetra
Mamaly an'i ysnita
Ho koa ny fanaovana fanatanjahan-tena toy ny mandeha, bisikileta na mandihy. Lucky
vatomamy dia hoy izy:
Tena mahatakatra anao tokoa aho fa izaho dia 11 ary ilay zazalahy tiako dia tiako ny namako akaiky indrindra ataoko ny tsara indrindra mba tiako azy ary mampidi-doza aho ary avy eo dia takatro fa tsy mendrika hijaly ny handratra ny tenanao ho azy ary isika izao namana tena tsara ary tiako izy ... <3 faooooooo tsy nilaza mihitsy aho hoe tsy tiako intsony izy. Ekeko fa zazalahy mahafinaritra be izy araka ny itiavako azy nefa avy eo hanenenanao ny marina lazaiko anao hoe maninona raha manao azy toa anao ianao dia hanimba ny fisakaizanao aminy ... ary ny tena izy dia sarotra be ny mampifanaraka ny olona toy ny izy ... noho ny tsy fanomezako lanja ny zavatra sarobidy aminy… nandany vola be tamiko ny niaraka taminy… tsara, mankanesa amin'ny tenanao ary raiso ny Fanapahan-kevitra tsara indrindra amin'ny fiainanao …… .. misaotra anao namaky
Mamaly an'i cande
Ny marina dia fantatro betsaka ianao fa izaho dia 11 ary ilay zazalahy tiako dia tiako ny namako akaiky indrindra ataoko ny tsara indrindra mba tiako azy ary mampidi-doza aho ary avy eo dia takatro fa tsy mendrika hijaly ny handratra ny tenanao ho azy ary ankehitriny mpinamana be izahay ary tiako izy ... <3 faooooooo tsy nilaza mihitsy aho hoe tsy tiako intsony. Ekeko fa zazalahy mahafinaritra be izy araka ny itiavako azy nefa avy eo hanenenanao ny marina lazaiko anao hoe maninona raha manao azy toa anao ianao dia hanimba ny fisakaizanao aminy ... ary ny tena izy dia sarotra be ny mampifanaraka ny olona toy ny izy ... noho ny tsy fanomezako lanja ny zavatra sarobidy aminy… nandany vola be tamiko ny niaraka taminy… tsara, mankanesa amin'ny tenanao ary raiso ny Fanapahan-kevitra tsara indrindra amin'ny fiainanao …… .. misaotra tamin'ny famakiana bayyy <3 <3
tena miasa ve ity?
Salama, inona no tianao holazaina amin'ny fampidirana ary ohatrinona no tsy maintsy raisinao?
Valiny tamin'i Antonia
Salama. Ho very lanja sy ho toy ny detoxifier, dia tsara io sakafo io. Fa mba hisorohana ny gazy dia heveriko fa tsy mandeha ...
Anisan'izany ny sakafo ronono (ronono, yaorta, fromazy ... broths legioma izay araka ny lahatsoratra dia azo atao chard (legioma lehibe) ... Ary paoma, voankazo bebe kokoa, salady manta (salady izay legioma lehibe koa) ... Izay rehetra misy fibre be dia be ary mirona miteraka entona tsy mahafinaritra. Indrindra rehefa mora zahana ianao.
Ary zavatra iray hafa, misotro hatramin'ny 7 teas isan'andro ... Tokony ho faritana fa ny anana sasany dia tsy azonao atao mihoatra ny 2 na 3 isan'andro, satria manana hery ara-panafody izy ireo, ary ny vokany dia toy ny fitsaboana tena (ohatra chamomile) ary afaka Manoro hevitra anao ny haka manokana sasany toy ny chamomile misy anis, mint, fennel ...
Izy ireo dia zavatra vitsivitsy izay tonga tamiko rehefa namaky azy io. Tsy misy fikasana hanafintohina, mba handray anjara fotsiny.
izaho claudia dia hoy izy:
Ny Isoflavone dia miteraka fivontosan'ny tsinay izay azoko atao hatramin'ny nahazoako ny filaharana mafana mialoha ny fahaterahana saingy naratra be ny tsinay ...
Mamaly an'i melo claudia
Ny marina dia niasa ho an'ny rahavaviko izy ary very farafahakeliny 4 5 kilao
Mamaly an'i rocio
Lilliana dia hoy izy:
Tena mandrisika ny lahatsoratrao ary misy fampahalalana marobe izay tsy fantatro izany
nampianatra ianao, ity mahavariana ity .. Te hamaly aho
ny vanim-potoana natokanao, miaraka amin'ny fisaorana tsy manam-petra,
ho an'ny manoro hevitra ny olona toa ahy hahaha.
Valiny tamin'i Lilliana